सलमान खानका फ्यानहरुका लागि दु:खद खबर – Khabaarpati
November 19, 2020 November 19, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on सलमान खानका फ्यानहरुका लागि दु:खद खबर
काठमाडौं । बलिउड सुपरस्टार सलमान खानका एकदम नजिकका व्यक्तिहरु कोरोना संक्रमित भएका छन् । अभिनेता खानका चालकसहित दुई कर्मचारी कोरोना पोजिटिभ भएका हुन् । सलमान खानले आफू क्वारेन्टाइन छन् । सलमान बिग बोस–१४ होस्ट गर्दै छन् ।
यस्तो अवस्थामा, अब हेर्नुपर्दछ कि ती आगामी एपिसोडहरूको लागि सलमान उपलब्ध हुन्छन् कि हुँदैनन ? सलमान खानले हालै राधे फिल्मको शूटिङ्ग शुरू गरेका छन् । यस फिल्ममा उनीसँग अभिनेत्री दिशा पटानी देखा पर्ने भएकी छिन् ।
यी सबै बीचमा, सलमान बिग बोस सीजन–१४ का होस्टको रूपमा पनि फर्केका छन् । यसले गर्दा यो समय सलमानका लागि निक्कै धक्का लागेको छ । सलमानका फ्यानहरुका लागि दुखद खबर हो ।,,, भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
सायद उनी बिग बोस सीजन–१४ मा केही समय नदेखिन सक्छन् । अझ उनीपनि संक्रमित भए भने लामो समय नदेखिन सक्छन् । यसैले हाम्रो प्रार्थना छ । सलमानलाई केही नहोस् ।
साडी कसरी लगाउने भनेर दोधारमा हुनुहुन्छ ? हेरौँ २ मिनेटमै साडी लगाउने सजिलो तरिका (भिडियो सहित्)
रेडलाइट एरियाका युवकले आफ्नो आमाबुवा सनि लियोनी र इमरान हासमी भनेपछि बलिउडमा हंगामा…